Ceelalyada Hore Ciidan adag, iyo Col ma ku Lahayd: qore Maxamuud Xaashi. - Xogside
Home MAQAALO Ceelalyada Hore Ciidan adag, iyo Col ma ku Lahayd: qore Maxamuud Xaashi.
Ceelalyada Hore Ciidan adag, iyo Col ma ku Lahayd: qore Maxamuud Xaashi.
Farxad iyo raynrayn weyn bay maanta ii tahay, mar hadii ay rumowday riyadayadii ku saabsanayd, casriyaynta iyo balaadhinta, marsada caalamiga ah ee dekeda Barbara. Eebe mahadii waxaan ka mid ahaa foolaadkii, iyo masuuliyiintii far ku tiriska ahayd, ee sida weyn uga fooliyay mashruucan maanta xoorkiisa iyo danbarkiisaba qarankeenu magaabiyay. Maxaa ka haboon in aan idhaahdo qaar ka mid ah erayadii ku jiray heesta Geela marka la soo horo ee uu darka ceelka isasoo tubo si uu biyaha u cabo. (Shifo ku afsaar oo shar kuuma leh).
Dhinaca kale, waxaan si weyn ugu mahad celinayaa, dhamaan xubnihii gudida aan ka mid ka ahaa, ee uu madaxweyne Silaanyo u magacaabay ka midho dhelinta mashruucan maalgashiga marsada Barbara. Nidaamka maalgashiga madaxabanaani maadaama uu ahaa mid ku cusub bulshadeena iyo baladkeenaba, wuxuu mashruucu noqday mid si weyn loogu kala maan duwanaa xilligaa. Hada akhriste maaha arrintani mid lala yaabo ileen maan rag waa mudacyo afkood’e. Allaw malo rag waa nooli’e, maanta markhaatigayo janno ma furmay!! Masuuliyiintaa waxaa ka mid ahaa marwo Samsam Cabdi Aadan, Dr Sacad Cali Shire, Cali Salaan Jirde(Cali Shoombe), oo uu daba yaaqadii badalay Maxamed Ibraahin Aadan (Qabyo-tire), Axmed Yuusuf Dirir waa hati dhawraha guud ee qaranka e, isaga oo xilligaa ahaa maariyihii dekeda Barbara. Waxaa kale oo gudidayadan kaaliyayaal u ahaa muddan in loo mahad celiyo lana maamuuso, Ifraax Aadan Cismaan oo ahayd madaxa xidhiidhka mashruuca DPWorld, iyo Caydaruus Mahdi Xaashi, oo ahaa xoghayaha gudida.
Ugu danbayn, waxaan u mahad celinayaa safiirkii Somaliland xilligaa u fadhiyay dalka Imaaraatka muddane Baashe Cawil Xaaji Cumar, kaas oo kaalin lama iloobaana ka qaatay inuu guulaysto mashruucani. Waxaa kale oo mudan in aan si gaar ah ugu mahad celiyo madaxweyne ku xigeenka jsl mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil (Saylici), gudoomiyaha Xisbiga Ucid eng Faysal Cali Xuseen, oo iyana mashruucan ku lahaa kaalin mug leh. Waxaan kaloo u mahad naqayaa mudanayaashii golaha wakiilada ee mashruucan ku ansixayay cod ka badan sadex dalool laba dalool tirada aqalka, iyada oo aydiideen laba mudane qudha mid kaliyina ka aamusay. Taas oo muujinaysay bisaylka iyo fahamka ay u lahaayeen, muhiimada iyo mudnaanta ay leedahay inuu qarankani helo mashaariic maalgashi oo caalami ah.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo Sagootiyey Madaxweynaha Maamulka Soomaalida iyo Wefti uu hoggaaminayo
Next articleGuddoomiyaha Maxkamadda Sare oo hambalyo u diray shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland maalinta xorriyadda ee 26 juun awgeed